Ny marika hafa an'ny orinasa YangLi, mifantoka amin'ny tanan'ny kabine ao an-dakozia, ny arimoaran'efitra, ny kojakojan-tokantrano. "Geriss" dia ho an'ny slide miafina avo lenta, ny rafitra boaty vy, ny tahony klasika eropeana ary ny tahony maoderina izay mankafy ny lazany eo amin'ireo mpanjifan'ny furnitue.
Ny niandohan'ny famoronana marika Geriss: "G" dia maneho ny lokomotif, nitarika an'i YangLi ho an'izao tontolo izao, "R" dia misolo tena an'i Yang Liren, ireo olona Li Li izay manaraka ny "lafy tsara sy ny fandriam-pahalemana, Li Bo ary tampon'ny" filozofia momba ny fandraharahana, miaro ny fandriampahalemana, fitoviana eo amin'ny fiainana, fahatokisan-tena, fiankinan-tena, fanamafisana ny tena ary ny fanahin'ny fanavaozana, hamoronana kalitao mihaja ho an'ny mpanjifa, mankafy haja ambony amin'ny kabine amerikana, indostrian'ny fanaka vita amin'ny hazo.
Ny sary mitsivalana an'i Yanlgi, ny savily manalefaka ary ny kojakoja fanaovan-lafaoro dia nasiana marika famantarana. Ny "Y" ao amin'ny YANGLI dia ho an'ny voromailala fandriam-pahalemana, midika izany fa ny orinasa Yangli dia mametaka olona mitovy fitoviana, raharaham-pihavanana, manaraka ny lalàna sy ny vinan'ny fifanarahana. Afaka manidina ianao. Ny marika YANGLI dia niorina efa ho 20 taona, miaraka amin'ny kalitao ambony, ny vidiny mirary, mankafy voninahitra lehibe amin'ny indostrian'ny fanaka eropeana sy amerikana.
Ny marika fahatelo an'ny orinasa Yangli, mifantoka amin'ny rafitry ny vatasarihana vy, sary mihetsika miafina, sary mihetsika baolina, fametahana sns sns. HIFEEL dia fohy ho an'ny "FAHAMARINANA MAHAY MASINA". Midika fa miezaka izahay mamorona vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifantsika.